किस्मीले मर्नुभन्दा अघि आमा र हजुर आमासंगै रमाइलो गरेको यी टिकटक भिडियो हेर्दा कसको मन नरोला र ?
स्याङ्जा चापकोटकी किस्मी थापा एयर होस्टेस हुँदा उनकी आमा विष्णुदेवी औधी खुसी भएकी थिइन् । गाउँघरमा किस्मीकै चर्चा हुन्थ्यो । त्यसले विष्णुदेवीको हर्ष बढेको थियो । तर, आइतबार मुस्ताङमा भएको तारा एयरको ट्विनअटर जहाज दु र्घ टनाले उनका सबै खु सी हरू खोसिदिएको छ । एयर होस्टेस किष्मी अर्थात् मनिषा थापा सम्पर्क विहिन भए पछि उनको आफन्त स्याङ्जाबाट पोखरामा त आइपुगे तर उनको कुनै सम्पर्क नभएपछि उनकाे अ त्तो प त्तो थिएन।
छोरी उडेको जहाज स म्प र्कविही न भएको खबर पाउँदा विष्णुदेवी छाँगाबाट खसेझैँ भइन् । उनलाई सम्हाल्न निकै मुस्किल भयो । उनी रुँदै पोखरा पुगेकी थिइन् । सोमबार बिहान जहाज दु”र्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएपछि तारा एयरले परिवारलाई शिक्षण अस्पताल काठमाडौं बोलाएको थियाे । पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दु र्घ टना स म्प र्क विहिन भएपछि २४ घण्टा पछाडी त्यो जहाज नै छे द वि च्छे द अवस्थामा भेटियो।
‘कृशमी जसलाई हामीले मनिषा भनेर बोलाउने गर्थेउ उनी आज भन्दा ७ बर्ष अगाडी अर्थात् २०१५ मा हाम्रो एकेडेमीमा भर्ना हुन आइपुगेकी थिइन् र मलाई अझैं पनि सम्झना छ उनी स्याङ्जाको एउटा विकट गाँउ बाट उनकै एयर होस्टेस सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान थिएन त्यति बेला उसलाई।
उनी आज भन्दा सात वर्ष अगाडी एयर होस्टेसको तालिम लिन पोखराको एउटा एकेडेमीमा आएकी रहेछिन। किस्मीले मर्नुभन्दा अघि आमा र हजुर आमासंगै रमाइलो गरेको यी टिकटक भिडियो हेर्दा कसको मन नरोला र ? पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस,
२०७९ जेष्ठ २५, बुधबार १२:३०0Minutes 578 Views